Azimuth, ugwu, na isi. Mụta ịlele kpakpando ndị dị na mbara igwe | Netwọk Mgbasa Ozi
Otutu maka nyocha nke kpakpando Dị ka nke elu-igwe abalị n'ozuzu na ọgbọ nke foto dị elu, ọ dị mkpa ịmata echiche nke azimuth na elu ugwu. Nke ahụ bụ isiokwu nke post. Have ghaghị ịma ihe azimuth bụ na ihe ọ bụ maka iji nweta ọtụtụ foto ị nwere ike ịhụ Sun na ọnwa n'otu oge ma ọ bụ ịchọta ụfọdụ kpakpando na mbara igwe.
Na nke a, anyị na-akụziri gị ihe niile gbasara azimuth na otu esi eji ya.
1 Kedu ihe bụ azimuth?
2 Gịnị bụ ugwu?
3 Azimuth na eburu na ọdịdị ala
4 Ihe eji atụ ihe
Kedu ihe bụ azimuth?
Ma azimuth na elu bụ nhazi abụọ na-adabere na ya kọwaa ọnọdụ nke ahụ dị na mbara igwe mgbe anyị lere ya anya site na otu ọkwa na n’oge ụfọdụ. Nke ahụ bụ, a ga-eji ya mara ọnọdụ nke Anyanwụ, ọnwa ma ọ bụ kpakpando ọzọ ga-enwe n'oge ọ bụla, dabere n'ọnọdụ anyị hụrụ onwe anyị na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji anya nke uche hụ otu kpakpando ndị dị na mbara igwe dịka Akwa agba anyị nwere ike ịchọ kpakpando ụfọdụ ga-enyere anyị aka ịchọpụta ha. Iji mee nke a, anyị na-eji elu na azimuth.
Ọtụtụ ndị na-ese foto na-eji nhazi ndị a ịchọta ọnọdụ nke ọnwa n'ehihie ma were foto dị egwu nke anụ ahụ nke eluigwe na mbara igwe n'otu oge. A na-akọwa azimuth na elu nke ọnọdụ Sun na Ọnwa na mbara igwe.
Azimuth abụghị ihe karịrị akuku nke igwe ọ bụla na-eme na North. A na-atụle akụkụ a site na klọọkụ elekere na gburugburu ọhụụ. Ya mere, onodu nke ayi hutara onwe ayi di nkpa iji choputa onodu nke igwe. Nchịkọta ndị a anaghị ekpebi ntụzi ahụ nke igwe. Ọ bụrụ na anyị atụwo ahụ nke eluigwe nke dị na Ugwu, anyị ga-ahụ na o nwere azimuth nke 0 Celsius, otu na East 90 Celsius, otu na South 180 Celsius na West 270 Celsius.
Enwere ngwa mkpanaaka na-echekwa ozi gbasara mbuli elu na azimuth nke anyanwụ na ọnwa maka ụbọchị na oge dị iche iche anyị chọrọ ịhụ. Maapụ azimuth na ugwu dị elu na-anọchi anya ya n'oge.
Gịnị bụ ugwu?
Mgbe anyị na-ekwu maka ịdị elu, anyị na-ezo aka na mbara ikuku angular dị n'etiti anụ ahụ dị na mbara igwe na mbara igwe nke onye na-ekiri ya hụrụ. .B. a na-akpọ nke a ụgbọ elu na-ekiri mpaghara. Maka onye na-ekiri ya na ọkwa ala, ịrị elu nke Sun na-ewepụta akụkụ nke na-eme ntụzi aka nke geometric center ya na ihu igwe anyị na-ahụ n'ọnọdụ ahụ.
Iji maa atụ, nrigo nke Anyanwụ ma ọ bụ ọnwa nwere ike ịbụ 12 Celsius mgbe etiti jiometrị ya dị na 12 Celsius n'elu mmiri nke anyị na-ahụ site n'akụkụ anyị nọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto a, ị ga-eburu n'uche ọnọdụ Anyanwụ ma ọ bụ ọnwa na ị ga-agbakọ elu. Maka ụdị foto ndị a, nke a bụ nzọụkwụ kachasị sie ike. Learnmụta ijikwa echiche nke azimuth na ịrị elu ọ ka mma ịhụ ọmụmụ banyere ezigbo ihe atụ.
Azimuth na eburu na ọdịdị ala
Uzo ozo nke eji eme ihe ndi a eme ihe bu ihe eji eme ihe na uwa nke topography na geodesy. Usoro ahụ bụ otu jikoro site n ’ugwu ma ọ bụ na ndịda ma na - aga na klọọkụ. Agbanyeghị, enwere ike ịtụ ya naanị 90 Celsius.
Ha abụọ na azimuth nwere njikọ chiri anya na ngalaba ọmụmụ ihe a. Enwere ike ịhụ ihe dị iche na echiche ndị a na azimuth nke akara nwere ike gbakọọ naanị ịmara agba, mana ọ bụghị nke ọzọ.
Can nwere ike ịnwale iji chọpụta uru nke akara na-esonyere isi ihe abụọ ọ bụla, ọ bụrụhaala na anyị nwere ike ịmata nhazi nke ugwu na ọwụwa anyanwụ. Enwere usoro dị ka azimuth dị na nke mbụ quadrant:
Na usoro a, Delta bụ ọdịiche dị n'etiti nhazi nke ọwụwa anyanwụ nke ebe mbata na ndị nke East nke ebe mmalite. Ikwesiri iburu n'uche onodu nke quadrant ebe azimuth di.
Ihe eji atụ ihe
A na-eji quadrant na obe eme ihe abụọ iji hụ kpakpando ndị dị na mbara igwe. A na-eji quadrant ahụ agbakọ elu nke kpakpando na mbara igwe. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ka Anyanwụ dịruru elu, anyị ga-akpachara anya ka anyị ghara ile ya anya ma ọ bụ na anyị ga-emebi anya anyị.
Mgbe ị na-elekwasị anya na quadrant na Sun, ị pụrụ ịhụ otú ụzarị nke ìhè ga-abanye n'ime ya na ọ ga-atumatu olu. Nke ahụ bụ mgbe ị matara na ọ dabara n'ụzọ zuru oke na ya. Ozugbo ha kwekọrọ, anyị na-eme ọgụgụ na quadrant na nke ahụ bụ ịdị elu nke Sun n'elu mmiri.
Gịnị ma ọ bụrụ na enweghị ìhè anyanwụ iji banye na akụkụ anọ? Onweghi ihe na-eme. N’abalị enwere ike iji ya chọta kpakpando ma mara ogo ya. A na-agbaso otu usoro ahụ, mana na nke a ị ga-enwe ike ile kpakpando ahụ anya, lekwasị ya anya ma lelee akụkụ anọ iji chọpụta ịdị elu ya.
N'aka nke ọzọ, Iji mara akụkụ angular dị n'etiti kpakpando abụọ, a na-eji obe a na-akpọ crossbow. Have ga-etinye obe ahụ dị n’elu isi gị, tinye mkpara n’akụkụ imi. Anyị na-etinye mmalite nke onye ọchịchị ahụ na kpakpando anyị chọrọ iji anya nke uche hụ na anyị ga-agụta ọnụ ọgụgụ nkewa ruo mgbe anyị ruru kpakpando nke ọzọ anyị chọrọ ịtụ. Nọmba a nke anyị nwetara ga-abụ ogo nkewa n'etiti ha abụọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, echiche dị ka azimuth, ugwu, na isi okwu dị ezigbo mkpa maka ịlele ihe ndị na-erughị eru. Ha bụ atụmatụ nke nwere oke nkenke yana ọtụtụ ngalaba bara uru na sayensị dị iche iche, site na ọdịdị ala ruo mgbe ị na-ahụ kpakpando.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Azimuth